Lungelelanisa Kwaye Ucoce | Ucanzibe 2022
Udidi Lungelelanisa Kwaye Ucoce
Njani: Ukuxhoma iifreyimu zemifanekiso eneeoksi ezimbini
Izakhelo ezixhonyileyo eludongeni lwakho zinokuba kukuhamba epakini, okanye eyona mpazamo yakho imbi (exhomekeke kumaphupha amabi, inokuba yinto enye, kodwa mna ndigungxula). Jonga indlela yokuxhoma izakhelo ngezihombiso ezoyikekayo ezibini, ngokulula nakwizame yokuqala emva kokutsiba, izakhelo ezixhonywe eludongeni ziqonde ngqo phambili ngaphandle kokuba ujongana nento ekhohlisayo efana nodaka okanye ikhonkrithi.
Izinto ezili-11 ezingalindelekanga onokuzicoca ngesoda
I-pantry yakho igcwele izinto zemihla ngemihla onokuthi usebenze xa ucoca.
Ndizamile Iindlela ezi-3 zokuCoca iipani zedrophu yam estovu kwaye endaweni yoko, andiphindi ndipheke kwakhona
Ndivavanye iindlela ezi-3 zokucoca izitovu zombane.
Iidraw zeHacker eziya kutshintsha indlela oCwangcisa ngayo yonke impahla yakho
Ukucinga kwakhona ngendlela ozisebenzisa ngayo iidrowa zakho-kunye noncedo oluncinci kwezinye iimveliso ezikrelekrele kunye nee-DIY ezinje ngezi-zinokwenza ukuba umntu onxibayo alawuleke ngokupheleleyo.
Indlela yokuCoca uMenzi weKofu
Ukucoca umenzi wakho wekofu kulula. Ngapha koko, sele unayo yonke into oyifunayo ekhaya. Inkqubo ayizukukhokelela nje ekuphekeni okungcono-iya kukhusela ukuthembeka komatshini wakho.
Le Deodorizer Eyenziwe Ngesibini Eyenziweyo Iya Kukwenza Ufune Ukucoca
Zama esi sisombululo silula, sendalo, esenziwe ekhaya kwaye kwangoko uphakamise inkqubo yakho yokucoca ngeveki.
Iindlela ezingama-25 ezintsha zokuphinda usebenzise iibhotile zakho zepilisi ezindala
Kukho uhlobo olukhethekileyo lokoneliseka oluvela kwiMacGyver-ing izisombululo kwizinto osele unazo.
Ngaba ihempe yakho iyaphuphuma? Kukho indlela elula yokuLungisa
Ungazigcina njani iimpahla zakho zasebusika (ke awunakuzihlamba okanye uphinde uzithenge kunyaka olandelayo)
Ukuphosa yonke impahla yakho yemozulu ebandayo emgqomeni okanye engxoweni yesithuba kunokuba yinto yokulungisa ngokukhawuleza, kodwa ngekhe uzenzele ikamva lakho xa usiza kubanda. Ukugcinwa okungalunganga kunokuthetha ukuba uphinde uthenge ukutya okutyiweyo kwenundu okanye usebenze nzima ukufumana ivumba elimnandi kwingubo yakho yexabiso.
Apho Ukuthenga Iqela elipheleleyo leHanger Wooden ngaphandle kokuqhekeka
Iihanger zomthi zinokufumana iindleko eziphezulu, kodwa akukho mfuneko yokuba uphule ibhanki ukuze uzifumane- ezi ndlela zixabisa ngaphantsi kwe- $ 1 kwihanger nganye.
Ukucoca ngeSoda yokubhaka: Nantsi yonke into Owafuna Ukwazi
Ngaba unomdla wokusebenzisa isoda ukubhaka ngokupheleleyo ekhayeni lakho? Nantsi indlela yokucoceka ngokukhuselekileyo nangempumelelo kunye nokutya okuyintloko.
Ungawamisa njani Umatshini Wokuhlamba Ukuhamba
Ngaba umatshini wakho wokuhlamba uhambahamba ujikeleza igumbi lokuhlamba? Ukuhlamba imithwalo engalinganiyo okanye ukuphumla iwasha kumgangatho ongalinganiyo kunokubangela isixhobo ukuba singcangcazelise kakhulu kwaye sihambe kwigumbi lokuhlambela impahla (oososayensi babhale indlela yokuziphatha, ukuhamba). Kwimeko apho ubunokuthandabuza, ayifanelekanga ukuba iyayenza loo nto. Kodwa yingxaki ebihlupha oomatshini bokuhlamba ngaphambili. Nantsi indlela yokumisa.
AbaCoci beKhaya aba-6 Abasebenza Ngokwenene
Nokuba ufuna ukutshintshisa ukomelela okunamandla, okunokuba yingozi kwezithako ze-pantry ezinobumnene-kodwa-ziyasebenza okanye ukhathazekile nje kukuba iimveliso zakho zokuhamba azikabikho kwisitokhwe ngenxa yobhubhane, cinga ukuzenzela ezakho, izicoci zasekhaya.
YINTONI NGOKWENENE njengokuPhila ngokuHlaliswa kweKhitshi evulekileyo
Abantu bokwenyani kumakhaya okwenyani babelana ngento ekuthi ngayo ukuba baneshelfu evulekileyo ekhitshini labo.
Uyisusa njani iPeyinti yobuso beHalloween okanye i-Makeup
Ngenxa yezizathu zokhuseleko uninzi lwezikolo, iicawa kunye neminye iminyhadala yentlalo icela abantwana ukuba banxibe ipeyinti yobuso endaweni yemaski. Siyakuqonda ukuqiqa, kodwa ngamanye amaxesha ayisiyiyo eyona ilula ukuyithatha. Ukwazi ukuba yintoni kwikhabhathi yakho yamayeza esele iyakwenza uxanduva kuthetha ukuba ungasusa ipeyinti ngaphambi kokuba abantwana bakho baphume ubuso kuqala esofeni beshiya amabala kwiminyaka ezayo.
Kwiyunithi yokuhlamba iimpahla yinto etofotofo, kodwa ngeziapps ungatsiba uhambo oluya kwindawo yokuhlamba iimpahla kwaye iimpahla zakho zicocwe kwaye zisiwe ngqo emnyango.
Izinto ezili-10 ezingalindelekanga onokuzifumana zicocekile ngokucoceka kwesitovu
Ezinye iimveliso zokucoca zisenokungasebenzi kakuhle njengesixhobo sokucoca i-oveni, kodwa iindaba ezimnandi kukuba, ungayisebenzisa ukucoca ezinye izinto ekhayeni lakho. Nazi iingcebiso ezilishumi.
Icandelo lokucoca ngokuqinisekileyo alikho mnandi (okanye limnandi) njengenxalenye yokupheka, kodwa ngumsebenzi ekufuneka wenziwe. Jonga ezi ngcebiso ziluncedo zesitovu umama wakho anokuzingca ngaso! Ukucoca njengoko usiya ngokwenyani yeyona ndlela ilungileyo yokuzisindisa ekucoceni intlekele yomonakalo onje ngentla. Kodwa ngamanye amaxesha ubomi buxakeka kwaye akukho xesha nje phakathi kokupheka kunye nokutya kunye nokuzibandakanya ngokuhlwa ukosula eso sitovu.
Uyenza njani igumbi lokulala kwigumbi lokulala ngaphandle komoya omncinci
Akukho gunjana lokulala kwigumbi lakho lokulala (okanye alonelanga indawo yekhabethe)? Gcina iimpahla ekuchithekeni zingene kwikhaya lakho lonke ngezi ndlela ezinesitayile.
Imfazwe enye yosuku olunye: Iingcebiso zokuCoca iKhaya lakho liphela ngosuku
Amaqhinga aSulungekileyo okuCoca iKhaya lakho liphela ngosuku olunye
Uthando lwenombolo ye-999
Ukufumana intsingiselo yengqekembe yeengelosi
amanani athetha into
Inani leengelosi ezingama-666 elinentsingiselo
Ingelosi inombolo 666 intsingiselo